एनआरएन अमेरिका विवाद समाधान गर्न कार्यदल – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / प्रवास / एनआरएन अमेरिका विवाद समाधान गर्न कार्यदल
एनआरएन अमेरिका विवाद समाधान गर्न कार्यदल
न्यूयोर्क । एनआरएन अमेरिकाको उम्मेदवारी विवाद समाधानका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विधान मस्यौदा समिति कार्यदलका संयोजक हेमराज शर्माको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका गौरीराज जोशीलाई विधानतः अयोग्य रहेको भन्दै निर्वाचन समितिले उनको नाम प्रकाशित नगरेका कारण विवाद बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को जर्मनीको फ्र्याङ्फर्टमा सम्पन्न बैठकले शर्माको नेतृत्वमा संरक्षक दिल गुरुङ र केन्द्रीय सल्लाहकार विश्वआदर्श पण्डित सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन विषयमा उत्पन्न विवादबारे निर्णय गर्नेछ ।
अमेरिकास्थित निर्वाचन आयोगले यसअघि अध्यक्षका आकांक्षी जोशीलाई विधानत? एक कार्यकाल काम गरेको खुल्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न पत्राचार गरेपछि संघका केन्द्रीय महासचिव डा. बद्री केसीले उनको योग्यता खुल्ने प्रमाणित पत्र निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएका थिए । लगत्तै अध्यक्ष शेष घलेले महासचिव केसीको पत्र आधिकारिक नभएको बेहोरासहितको पत्र निर्वाचन समितिलाई पठाएको थियो ।
Previous बोस्टनमा कलश यात्राको तयारी
Next अमेरिका आउँदै गायिका अन्जु पन्त